Isiokwu Comparison: Kedu nchọgharị na-erepịa ọtụtụ? Rekonq, Firefox, Chrome, Chromium ma ọ bụ Opera | Site na Linux
Taa, m tetara n'ụra ịmata ihe ... ole ihe FromLinux na-eripịa ihe nchọgharị?
N'ihi ya, ekpebiri m imepe ya ma hụ oriri nke Firefox (isi ihe nchọgharị m) mepụtara, mana echere m na n'ime ihe nchọgharị ọ bụla m ga-eri ihe dị iche, yabụ echere m na ọ kwesịrị ekwesị ịme tebụl atụnyere na-egosi oriri nke ihe nchọgharị ọ bụla M na-eji mgbe ndị a na-emeghe Ndokwa.
Lee, m na-egosi ha:
Dị ka ị pụrụ ịhụ, lee, anyị na-atụnyere:
Ihe nchọgharị Google Chrome (v21.0.1180.79)
Nchịkọta oriri ndị a ị na-ahụ bụ maka ihe nchọgharị ọ bụla nwere profaịlụ dị ọcha, ya bụ, m na-eji profaịlụ ọhụụ ọhụụ ... yabụ Firefox ma ọ bụ Chrome / Chromium enweghị ntinye etinye, ọ nweghị ihe nchọgharị na-eji oghere dị ka ọ bụ oghere, wdg wdg Onye ọ bụla bụ oghe maka oge mbụ 😉
Ka i si hụ, Firefox bụ onye na-erikarị RAM, na 48MB nke RAM na-eri, na-esote opera na ọ fọrọ nke nta 30MB, mgbe ahụ, n'ihi na Rekonq na 24MB, mgbe ahụ, Google Chrome pụtara na 15MB, n'ikpeazụ, nke kachasị dị mfe bụ chromium jiri naanị 12MB RAM rie.
… Data ndị a ezighi ezi. Ọ na - eme na ha abụọ Google Chrome dị ka chromium ha anaghị eji otu eri, yabụ ihe nchọgharị abụọ a anaghị eri nke ahụ. Iji kọwaa ya nke ọma, m na-egosi gị nseta ihuenyo, na niile Filiks na Chromium:
Dị ka ị pụrụ ịhụ, e nwere Usoro 7 jikọtara na chromium, yabụ na ANYANN enweghị ike ikwu na dị ka nseta ihuenyo na mmalite, Chromium na-erepịa naanị 12MB RAM.
Ọ bụrụ na anyị gbakwunye oriri nke usoro Chromium ndị a, anyị ga-ekwubi nke ahụ chromium iji FromLinux mepee ọ na-erepịa karịa ma ọ bụ obere 40MB nke RAM.
Otu ihe ahụ na-eme na Google Chrome, n'ihi na ọ naghị eri naanị 15MB nke RAM, mana na-agbakwunye eri niile ma ọ bụ usoro ya, anyị bịara na nkwubi okwu na ọ na-erepịa ma ọ bụ obere 46MB nke RAM.
N'ikpeazụ, nsonaazụ ikpeazụ ga-adị ka nke a:
Echetara m, nke a bụ ENWEGH using iji data profaịlụ, ya bụ, na ihe nchọgharị ọhụụ ọhụụ, arụnyere na enweghị data ma ọ bụ ntọala echekwara na profaịlụ.
Ma, ebe ọ bụ na ọ dị obere na anyị nwere profaịlụ nke ihe nchọgharị ọ bụla dị ọcha, m ga-agwa gị na n'ọnọdụ m, na ntọala m, mgbakwunye na data ndị ọzọ nke profaịlụ nke ihe nchọgharị ọ bụla, ... nke ọma, ana m egosi gị data 😉
Opera "-" 82MB MB
Firefox «-» 65MB MB
Chromium «-» 64MB MB
Rekonq «-» 26MB MB
Dị ka ị pụrụ ịhụ ... Opera abụghị ihe nchọgharị kachasị mfe dị ka ọ dị na mmalite nke post, n'ihi na mgbe Opera (dị ka ndị ọzọ) malite ịchekwa wee jiri data sitere na nzuzo ya, mgbe ọ nwere kuki. , okwuntughe echekwara, na nhazi ndị ọzọ, obi abụọ adịghị ya na oriri ya na-abawanye n'ụzọ pụrụ iche, na nke m ọ na-abịa naanị site na FromLinux meghere karịa 80MB nke RAM.
Nsonaazụ ndị a ekwesịghị ịbụ otu ihe maka gị niile, mana ọ nwere ike inye gị nghọta ụfọdụ, nri? 😉
Enwere m olileanya na post ahụ na-atọ gị ụtọ, ekwenyesiri m ike na ị ga-achọ iji oriri nke ihe nchọgharị gị tụnyere ... nke ọma, akwụsịla, mee nyocha ma gosi data ebe a! … N'ụzọ ahụ niile anyị nwere ike ịnwe echiche ziri ezi dịka o kwere mee 🙂
Ọ bụghị asọmpi iji hụ nke ihe nchọgharị na-ere ma ọ bụ nke pere mpe, mana nke na-ekwusi ike kacha mma n'etiti nhọrọ, atụmatụ na oriri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Isiokwu Comparison: Kedu nchọgharị na-erepịa ọtụtụ? Rekonq, Firefox, Chrome, Chromium ma ọ bụ Opera
Echere m na m chere na Opera dị mfe.
Nkwupụta ahụ mehiere, m tinye «echere m na echere m» 😛
N'ezie, ọ dịkarịa ala, ọ bụ ya na-eri m ọtụtụ ihe.
Onye ohi paireti dijo
Nke ahụ dabere na ihe pụtara dị ka fechaa.
Iji maa atụ, Opera na-ewe obere oge iji bido karịa Firefox na agbanyeghị na o nwere oriri nchekwa dị elu, nchọgharị ka mma karịa mmiri.
Site n'ụzọ, maka ndị na-amaghị, Opera webatara onye ahịa e-mail nke na-arụ ọrụ dị ukwuu, onye na-agụ akụkọ akụkọ, RSS, na-enye ohere ibudata faịlụ Torrent, ijikọ na IRC, imepụta ndetu na amaghị m ihe ọzọ.
Ọ bụrụ na ị gbakwunye oriri RAM nke ịnwe mmemme nke ọrụ ndị a na-arụ n'otu oge, ị ga-ahụ na Opera's RAM na nhazi ihe oriri adịghị elu.
Ke adianade do, ọ synchronizes nnọọ ọma n'etiti dị iche iche dị ka ekwe ntị, mbadamba ma ọ bụ ndị ọzọ na kọmputa.
Site n'ụzọ, maka ndekọ ahụ, abụ m onye ọrụ Firefox na Opera enweghị nọmba ọnụọgụ tinye na onwere ụfọdụ m na-enweghị ike ịme na-enweghị ya. 🙁
Zaghachi maka Paireti Paireti
O doro anya, Opera na-etinye ọtụtụ, ọtụtụ karịa ihe nchọgharị ndabere ọ bụla, yana nhọrọ ndị ọzọ karịa nke ọ bụla, ekwatụbeghị m ma ọ bụghị.
Ma na nke m, Achọghị m onye ahịa email na ihe nchọgharị ahụ, naanị inye ihe atụ.
Ekwadoro m ka ị hụ njirimara niile dị na Wikipedia:
jide firefox l..l
Ma ọ bụ, opekata mpe nke ahụ bụ etu ọnụọgụgụ siri gosipụta tupu "mmezi ikpeazụ" emee, na agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na "ọ dị obere na profaịlụ na-adị ọcha mgbe niile" ọ bụkwa eziokwu na mmadụ niile nwere ha " ahụ nke ruru unyi »na otu nhazi, ndọtị na data ndị ọzọ.
Ma ịkọwapụta ihe onye ọzọ na-ekwu n'okpuru, ebe nchekwa bụ ihe dịkarịa ala na nke kachasị ihe ọ bụla abụghị "ịdị nfe." ezigbo ọkụ dị na arụmọrụ ahụ ọ bụ ya mere ọtụtụ mmadụ ji ekwu okwu banyere Chrome na Opera dị ka ọkụ na ngwa ngwa, yana Firefox dị ka shit +++ (ma e wezụga ndị Fans ha).
Ruo mgbe 14 version FF ọ bụ n'ezie egwu, si mbipute 15 na nke ugbu a 16 ọ rụrụ ọrụ nke ọma ọzọ, a silk.
N'aka nke ozo, Chromium, nke rue ugbua bu ihe nchọgharị m, gbanwere nke ojoo na uzo abuo gara aga, na-eri _too much_ processor obula mgbe o na-abaghi ​​uru - echiche nke sandboxing di nma nke oma ma na Chrome / Chromium amaghi nke oma , ka anyi kwuo ...
Odi nma na m kwenyere na tebulu ndi ahu ogologo oge u_u
haha, mu onwe m
Ebe m na-adịghị bu n'obi na-egosi gị ihe bụ eziokwu, kama otú hotara na mbụ nchọgharị na-akpa àgwà na ọrụ m gburugburu ebe obibi, na o doro anya na ... m òkù ka ị tinye gị data 😀
Anaghị m agbanwe Firefox ugbu a maka ihe nchọgharị ọ bụla. Ekwuru m!
Anyị adịworị abụọ
Amen. Agbalịrị m ọtụtụ oge ịgbanwe FF maka ihe nchọgharị ọzọ na enweghị m ike iji ya. ntụpọ ha (nke ha niile nwere), adịchaghị oke maka m. N'agbanyeghị nke kacha mma!
Otu ọzọ na klọb, anaghị m agbanwe Firefox / iceweasel / icecat.
Anaghị m agbanwe ya. M na-anwale Opera na ikwu omimi, na ọ bụ oké ... ma ọ bụ free na ọ bụghị Firefox. Na Chromium m na-anwale nke ọma ọnwa ole na ole. Mana mba, ha enweghị ike dochie Firefox.
Anyị atọ adịla!
Ma ọ dịkarịa ala na Internetntanetị m, ma ọ bụ na laptọọpụ m na ntọala ya, Firefox, ọ na-ewe ogologo oge iji jupụta peeji nke ejiri Chromium ma ọ bụ Chrome, ana m ahụ na sekọnd. N'ezie m ga-ahụ mgbakwunye ndị m tinyere n'ebe ahụ, mana ọ na-ewe ogologo oge, na-ewe iwe ..
anyị anọworị 4, FireFox FTW!
Aga m asị 5
6 ... (na m jere ije niile)
Kedu otu chrome na chromium siri dị iche na ha ga agba ọsọ dị iche?
Lee ndị iche: http://en.wikipedia.org/wiki/Chromium_%28web_browser%29
Chrome bụ Chromium mana ejiri ụfọdụ ihe akọwapụtara na google. Amaghị m n'ezie ole n'ime ihe ndị ahụ dị, mana amaara m nke nwere ike ịdị na ego ahụ maka ebule ahụ: Onye na-agụ PDF agụkọtara ọnụ.
N'ezie, ọ bụghị naanị ya.
Tinyere ihe ndị ọzọ, Chrome na-ewetara ya Adobe Flash ngwa mgbakwunye yana kwa ezigbo mma EULA.
53.9 MiB na Firefox 10.0.9
56.7 MiB na Opera 12.02
Ezi ntule na eziokwu bụ na ọtụtụ kwuru na ekwu okwu banyere ya. Eziokwu mgbe ntụgharị na Firefox yana ihe nchọgharị Google dị na ndepụta ndị ejiri. N'ebe a, mmadụ nwere ike ịjụ ihe kpatara ya, ebe ọ bụ na n'ọtụtụ ụzọ ọtụtụ ndị ọrụ na-ekpebi otu ma ọ bụ nke ọzọ kama n'ihi ikike ha nwere iji mụta nwa ọdịnaya weebụ na-enweghị ọtụtụ nsogbu (Ọ dị mma, ọ bụghị ha niile, akụkụ dị mma nke ndị a).
Mụ onwe m na-eji WEB (Epiphany na laptọọpụ na Midori na desktọọpụ) na eziokwu bụ na ọ bụ ezie na ha nwere obere nkọwa ha, ha adịghị njọ.
Daalụ maka data ahụ ma m ga-edebe ya maka ntụnye, nke a bụ n'ihi na ịnweta weebụ bụ ndokwa nke azịza kwụ ọtọ yana oriri ya yana nchekwa dị mkpa.
Eeh, Agbaghara m ikwu ihe banyere Midori mana etinyeghị m ya installed
Mmezi na ahịrịokwu na-esonụ, na mmụọ na-ewuli elu:
»Ihe data ndị a ezighi ezi. Ọ na - eme na Google Chrome na Chromium anaghị eji otu eri, yabụ ihe nchọgharị abụọ a anaghị eri ya. Iji kọwaa ya nke ọma, m na-egosi gị nseta ihuenyo, yana usoro niile Chromium na-eme: »
Ha niile na-eji ọtụtụ eri, firefox na-eji ihe dị eri 35. Ihe na-eme bụ na Chrome / Chromium na-eji ọtụtụ usoro. A eri bụ ihe ọ bụla karịrị otu nke ime na ike na-emejuputa atumatu na ọtụtụ ụzọ. Usoro bụ usoro ihe ncheta dị mgbagwoju anya karị, otu usoro nwere ike ịnwe ọtụtụ eri.
N'ezie, na ilele ya anya mbụ, ọ dị ka Firefox (ịgbaso ihe atụ) jiri naanị otu eri ma ọ bụ usoro, mana ọ bụchaghị ihe dị iche na ndịiche between
Amụtala m ihe ọhụrụ, daalụ 😉
Ọmarịcha. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ eri nke usoro ọ bụla ị nwere ike iji ịba uru htop. Nke a depụtara usoro abụọ ahụ na eri ahụ, mana ị nwere ike ịmata nke bụ eri ebe ọ bụ na ha kesara PID nke usoro nke ha. Na H (Mgbanwe + h) na K (Mgbanwe + k) ị zoo eri site na ohere onye ọrụ (ka ọ ghara inwe mgbagwoju anya na eri ọkwa nke onye ọrụ) na eri sitere na kernel ohere (ka aghara iji mgbagwoju anya kernel).
Htop egosighi ihe a na-akpọ ọkwa ọkwa onye ọrụ, ebe ọ bụ na onye ọrụ ya kere ya naanị ya ma ha. Nanị kernel na-ahụ ihe a na-akpọ eriri kernel ma ọ bụ rthreads, nke a na-emepụta n'ime usoro onye ọrụ mana site na oku na kernel, nke a na-akpọkarị mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ. Usoro ikpeazụ ndị a bụ ndị na-enye ohere iji ihe karịrị otu isi (anụ ahụ ma ọ bụ mebere) n'otu oge ahụ rụọ otu usoro ahụ.
Ee, ụnyaahụ ka m na-ekwu okwu na elav na iji hụ eri ị nwere ike iji htop 😀
Daalụ maka ikwu enyi, m na-eme 🙂
PS: Oge ọ bụla m na-amụtakwu banyere usoro, eri na echiche ndị ahụ hehehe.
Firefox nwekwara usoro ntinye ngwa mgbakwunye ma ọ bụ ihe yiri ya
Ihe @Ankh dere bụ ihe ọ ga-ekwu xD
Ọzọkwa, kwuo na oriri nke ebule na mmemme bụ otu n'ime ihe na-atọkarị ụtọ taa ịhọrọ ihe nchọgharị weebụ. Nke mbu, n’ihi na ọtụtụ PC nke oge a nwere ebule zuru oke nke na ị gaghị echegbu onwe gị. Nke abuo, n'ihi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmepe niile lekwasịrị anya na ngwaọrụ mkpanaka, ntọala nke ihe nchọgharị niile dị ugbu a na-echebara akụkụ nke ịghara iji ebulu ahụ egwu.
Ma nke a bụ ihe: agha a na-alụ bụ Gecko, WebKit, na Presto.
O doro anya, dabere na gburugburu ebe anyị na-aga, otu ma ọ bụ nke ọzọ ga-aka mma. Ihe m na-agaghị eji ọzọ na Linux bụ Opera. Ọ bụ ezie na ọ nwere ezigbo nkwado maka WebGL, na mkpokọta, ọ naghị akpa agwa dị ka ọ masịrị m na Linux, yabụ ihe dịka otu izu gara aga m kwụsịrị iji ya na desktọọpụ. Firefox na Chromium bụ ndị na-eme ya nke ọma, isiokwu a bụ nke uto. Maka KDE, ebe ọ bụ na mmadụ abụọ ahụ dị n'elu anaghị eji Qt, Rekonq (agbanyeghị m nwalere ya) o nwere ọgụgụ isi karịa Opera.
Ole na ole na-efu efu, dị ka Midori, Epiphany, na Qupzilla. Tebụl dịkwa ezigbo mma 🙂
Chrome na-erepịakwa ọtụtụ ihe dị ka taabụ na tinye-ons. Maka ojiji m na-enye nchọgharị bụ ihe kachasị njọ (ana m emeghe ọtụtụ taabụ mgbe niile).
N'ihe m, Firefox anaghịzi eri m ọtụtụ akụ dị ka ọ dị na mbụ, ụmụ okorobịa si Firefox nọ na-emeziwanye na ọ na-egosi, Chromium na-eri m naanị obere ihe na na enweghị mgbakwunye, fuuuu na ịghara ịkọ mgbe m nwere ọtụtụ taabụ.
na nke m, Firefox bụ nke kacha enyere m aka, ọ na-arụ ọrụ, a na-akpọ chrome na chromium mgbe ụfọdụ (xubuntu 11.10, 512 ram, 1.6 Ghz) rekonq Anwalebeghị m it. Aga m ahụ ihe na-eme xD
Ọ naghị adịrị gị mma iji rekonq n'ihi na ọ na-eji kde ọba akwụkwọ, na nke gị ọ ga-aka mma midori
Agbalịrị m ya, ọ dị njọ…. oriri gafere Firefox, naanị na google meghere 96 mb gbakwunyere ọtụtụ usoro (ihe dịka 20) nke megaby 3 ọ bụla nke m na-amaghị ihe ọ bụla.
Agbalịrị m midori a mgbe gara aga…. mana ekwenyeghi m, n'ihi na ugbu a, m ga-aga n'ihu na ff ruo mgbe m melite ite m.
Echere m na m ga-akwụsị iji opera ma gbalịa ihe ọzọ free.
You ma ka rekonq ma ọ bụ qupzilla si akpa agwa? Ana m eji kde 4.9.
M na-agwa gị banyere ahụmịhe m, m mere mkpesa banyere oriri nke FF mana mgbe m gbanwere ndị ọzọ, ha nwere "nwayọ" ka akwụkwọ mpịakọta ahụ na-agbanwe na taabụ yiri ka ọ dị arọ, n'ikpeazụ m na-arapara na FF 😉
Ọ bụrụ na ntụnyere na-atọ ụtọ 0 / na-amasị m rekonq, Naanị m ga-enweta nkwụsi ike ka ọ bụrụ isi ihe nchọgharị m. mgbe m na-eji m tụkwasịrị obi Firefox 😀
Naanị m na-eji opera, enwere m opera njikọ arụ ọrụ, amaara m na ọ bụghị nke kachasị, mana ọ na-arụ ọrụ nke ọma maka m
Emeghere m ya ka m gụọ okwu a banyere ihe nchọgharị na kubutu, yana ctrl + esc, ahụrụ m na ọ na-erepịa 143004k!
Zaghachi ka mgluna
M na-eji Opera na m ga-aga n'ihu na-eji ya n'ihi na agbanyeghị ọnụọgụ, ọ bụ ihe nchọgharị kachasị ọsọ ma enwere m obi iru ala na Opera.
Opera adịghị ncha, mana ọ dị oke ibu.
Dika egosiri nke oma, Chrom * nwere otutu uzo mepere emepe, na Gnome, ebe Opera na aru m ihe dika 200 MB na otutu taabu mepere emepe, na ntinye ikike 2 ndi ozo sitere na 320-340 na Chormium na Chrome n’otu n’otu, ma emeghm. nwalee ya na otu distro, ọ bụ ezie na ọ bụ mgbe niile na otu desktọọpụ gburugburu ebe obibi.
Ya mere amaghi m ebe ha si enweta "naanị" onye ọ bụla n'ime 2 Chrom *. Na nke a, iji ihe dị mfe karịa Opera yana ọtụtụ arụmọrụ, enwere FF, ọ bụ ezie na ọdịiche anaghị eru karịa 80-90 MB.
Maka m ndị ahụ bụ nhọrọ 2 kachasị mma (Opera na FF), oriri MB (dịka nke ozi nkeonwe, nke ahụ bụrịrị okwu ọzọ dị oke mkpa iji tụlee) nke Chrom * anaghị eme ka m chee na ha ruru ya maka ihe ha na-enye.
Chromiun Rulez hahaha Echere m na Firefox riri Ram ma ọ dị ka m kwuru eziokwu
Ha bụ 1MB iche, ufffff, ị bụ n'ezie "kpamkpam nri".
Ajuju ị nwere ike ịmata ihe kpatara Chrome ji apụta ma ọ bụrụ na m si Chromium?
You gbanwela ihe na UserAgent?
Ike gwụrụ m na nso nso a na Firefox. Lee, ejirila m ngwaahịa Mozilla rụọ ọrụ ebighi ebi, site n'oge m na Windows na nsogbu nchekwa ya. Nke nta nke nta ahapụwo m ha n'okporo ụzọ: Sunbird, Thunderbird…. na ugbu a Firefox. Echere m na ihe nchọgharị ndị ọzọ na-emeri egwuregwu ahụ, mana m ghọtara na Mozilla na-alụ ọgụ megide ndị Refeyim na nke ahụ chọrọ nkwado nke ndị na-eguzosi ike n'ihe nye ya ... .. mana n'oge na-adịbeghị anya, m na-agbanye ụfọdụ peeji .... amakwa m na ọ bụ n’ihi ụda ya ka njọ maka Linux. Chrome bụ ihe nchọgharị kachasị mma m jiri, n'ụzọ ọ bụla, kemgbe ụbọchị ọla edo nke Firefox, mgbe ọ malitere imere onwe ya aha.
Ọ bụrụ na kpọmkwem na Linux bụ ebe Firefox na-arụ ọrụ kachasị mma, ọbụlagodi na m ga-enwe PC desktọọpụ na Windows 7, enwebeghị m mkpọka na-eme nchọgharị na Linux yana na Windows 7 ihe m nwere enweghị ike ịkpọ mkpọka, emere m ọ bụghị m gbanwere ya n'efu, ọ bụ ezie na nke ahụ bụ uche m.
Na Opera na-aga n'ihu na-emechu m ihu. Enwere ọtụtụ ihe iji hazie na maka uto m ọ na-adị oke ọrụ. Ga-enweta "suite igodo" na ihe nchọgharị dị mfe, na obere oriri.
Ukeke 26 dijo
Anọ m na-eji Opera ogologo oge wee malite ịnwale Rekonq maka ụmụ amaala kde ndị ọzọ. Ọ bụ ugbu a ihe nchọgharị m kachasị wee kpuchie mkpa m 95%. Ọ bụ eziokwu na ọ ka nwere ntụpọ ụfọdụ, mana n'oge na-adịghị anya ọ nwere ebumnuche ịbịakwute ubu ya na ndị isi n'ihe gbasara ikike. Ugbu a ọ nwere: ọsọ ọsọ ọsọ, ibe edokọbara, taabụ nyocha, cheta okwuntughe, ngwa nchọta ọdịnala, omnibar, ma ọ bụ ihe ọ bụla akpọrọ (chọọ site na adreesị adreesị, dịka ọmụmaatụ na ihe ọ bụla ịchọrọ ịchọrọ na youtube) mmekọrịta nke ibe edokọbara, okwuntughe, akụkọ ihe mere eme na ftp. Bịa, ọ bụghị a kacha nta nchọgharị.
Zaghachi ka uke26
Yep, Rekonq bụ n'ezie ỌMA!
M nwute na m na-eji ụfọdụ tinye Firefox tinye-ons nke ukwuu… maka Rekonq na-agagharị ọsọsọ maka m, mepee ọtụtụ ngwa ngwa ma rịa obere… bịa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ LOL zuru oke!
Edemede ahụ dị ezigbo mma, achọpụtakwa m ya, naanị m na-eji opera na chrome, ebe ọ bụ na m mechara chọpụta mgbe anwalechara m, ha bụ ndị kachasị ọsọ mgbe ị na-eme nchọgharị, nke bụ ebumnobi kachasị nke ihe nchọgharị ọ bụla, n'ihi na m na-ahọrọ ha, ọ bara uru ịchụ 20mb ọzọ ma ọ bụrụ na m nwere ike ịnyagharịa ngwa ngwa.
Enyi, nsogbu bụ na ha anaghị 20 MB oke, abụ m otu n’ime ndị mejupụtara ihe nchọgharị ahụ na taabụ, enwegogo m ihe dị ka taabụ 20-24 mepere na Firefox, ihe Firefox na-ejikwa ebe nchekwa dị mma. M na-anwale nke a na Chrome, a na-ahụ ihe dị iche, n'ihi na taabụ ọ bụla na-abawanye oriri ahụ nke ukwuu, ma ana m agwa gị na ọ bụghị naanị 20MB, ọ bụ 200-300MB karịa na nke m, nke m na-eche mgbe m jiri ya laptọọpụ na nke a bụ ihe oriri na ụba = karịa oriri batrị = obere ndụ batrị.
Mgbe m chọrọ ka batrị ga-anọ ogologo oge m na-eji Epiphany nke nwere obere ihe oriri, mana m na-ejikarị Firefox.
Make na-eme mmekọrịta dị iche na ncheta ọzọ na-eri karịa batrị ndị a na-eji dịka a ga - asị na ọ bụ iwu na ọ dịkarịa ala anụtụbeghị m.
N'aka nke ọzọ, a naghị enweta nchekwa nchekwa dị ala site na enweghị ebe, nke ahụ na-egosipụtakarị na a ga-akwụ ụgwọ ya na ọtụtụ ọrụ nhazi yana ọtụtụ ndị na-agụ / na-ede na diski ahụ, yabụ na ịnweghị ike ịnwe nri batrị dị ala karịa na iche.
Versionsdị Alfa bụ maka ịgbakwunye na ịnwale atụmatụ ọhụrụ, ha abụghị maka idozi chinchi, ha nwere ike ọ gaghị enwe ọtụtụ chinchi ma rụọ ọrụ nke ọma, mana ọ bụ lọtrị ịmara ma ha nwere ma ọ bụ na ha enweghị.
Versionsdị Beta EE ga-emezi ahụhụ ma kwadebe ka ọ bụrụ nke siri ike, mana ọ bụrụ na ejiri m ụdị Beta nke Google Chrome, a ga-atụba ha niile n'ime afọ onye dere edemede ahụ.
Mgbe inwetara weebụsaịtị, oge a ga-ebu ya nwere ike ịbụ na Firefox na-erepịa 30% na Chrome 20%, mana ozugbo ebuchara ibe weebụ, ha abụọ belata oriri ha na ọkwa nhazi, fọdụrụ na 1 ma ọ bụ 2%, kama RAM ka edobere, ebe m gwara gi Chrome na-eripia ihe.
M na-ebukarị ọtụtụ peeji, mana na nke ọ bụla, m na-etinye oge dị ukwuu na-agụ akwụkwọ n’agbanweghị agbanwe ya ma na-ebunye ya ihe dị iche, yabụ enwere m ike ịgwa gị na ọ bụ ihe pụtara ìhè na m.
Daalụ maka okwu gị 🙂
Ee ee, o doro anya, a na m achụ RAM n'achọghị n'eche maka ya ka m wee nwee ike ịnyagharịa ngwa ngwa hahaha, mana njedebe m abụghị ihe nchọgharị ahụ, kama ọ bụ ihe bandwidth m na-asọ oyi
Ọ bụghị maka ihe ọ bụla, mana gịnị kpatara ị ji eji nsụgharị nsụgharị na ihe nchọgharị niile na firefox ị na-eji nsụgharị Alfa nke nwere ike jupụta njehie na ncheta ebe nchekwa? Na Firefox 16.0 ọ na-erepịa m ntakịrị ihe na-erughị Chromium
Ma ọ bụ ụzọ ọzọ dị gburugburu, mkpụrụedemede alpha bụ nke enwere ike idozi ya mgbe nsụgharị ndị kwụsiri ike ka na-ebu nsogbu nke ịdị arọ na ntanye dị ka oge niile.
Ndo, m debere azịza ya site na ndudue:
Mgbaghara m maka nke a bụ na ụdị nke Firefox nke m jiri ruo n'oge na-adịbeghị anya bụ na, 18a1 ... M na-eji alfa mee maka obere oge, naanị m jiri ụlọ anụ ọtụtụ izu 😀
N'ezie, enweghị m nsogbu na mkpụrụedemede ahụ, ha kwụsiri ike na Firefox.
Na-akpali mmasị !!
Yep… 😀 - » https://blog.desdelinux.net/tag/rekonq/
Iji malite: ezigbo post.
Banyere ọdịnaya ahụ, ebe ọ bụ na m nọ na Chakra m na-etinye Firefox n'akụkụ, ebe ọ bụ na ọ bụghị na Qt na ọ na-arụ ọrụ mgbe niile na gburugburu KDE, ịmalite, nsogbu ọ dị itinye ya na Spanish, opekata mpe na Chakra.
N'aka nke ọzọ, ugbu a ka m karịa Opera, ihe nzuzo dị na Chrom * karịrị obi abụọ, yabụ m họọrọ Opera, ọbụlagodi na m matara na ọ bụghị "isi mmalite".
Agbalịrị m Reqkonq, mana nsogbu ahụ (na ọ nweghị onye kwuru ya) bụ na agbanyeghị na Opera RAM na-eri ihe dị elu, Rekonq na-erepịa okpukpu abụọ nke CPU dị ka Opera na ndabara, na ọ nweghị onye kwuru ya! . Taa ọtụtụ desktọọpụ na-abịa na 2-4 Gb RAM, mana CPU nwere oke karịa, ọkachasị ma ọ bụrụ na usoro ndị ọzọ na-agba ọsọ, na mgbe Opera na-erepịa 4%, RK na-aga 8-9%, na na oge ọ bụla, naanị ugboro abụọ CPU.
Daalụ maka mbido 🙂
Achọpụtabeghị m oke oriri CPU site na Rekonq, ọ bụ ezie na m na-eji ya maka saịtị dị mfe dịka GMail ma ọ bụ FlatPress m, yana anaghị m ele vidio dị n'ịntanetị, yabụ ndị nyocha m anaghị ata ahụhụ ...
Opera na-amasịkarị m, mana maka ihe na ndụ m na-ejedebe iji Firefox 😀
N'agbanyeghị ihe niile, Firefox agbanweela n'ụzọ dị oke mma, agbanyeghị na a ka nwere ihe ndị ka mma, anaghị m agbanwe skonku maka ihe ọ bụla.
Onu ogugu na.
A na m eche ule ule a, mepee ọtụtụ taabụ ma na-agagharị, opera na-ewepụta etu o si dị mma na ọrụ na chromium ga-imikpu ka ha na-eme ọtụtụ ọrụ ...
Nke a dị ka opera fan club, eziokwu bụ na ihe nchọgharị a abụghị ihe ijuanya ha na-ekwu, n'ihi na m na ọ bụ nnọọ ezu na igodo bụ egwu.
Opera bụ ọkụ na ịntanetị ... ozi ya bụ ịchekwa data ... dị ezigbo mkpa maka njikọ Wi-Fi pere mpe ... isi ihe ọzọ dị na ya ... Opera na-achịkwa ebe nchekwa ya ka ọ ghara ibudata ha ọzọ ... ma ọ bụrụ na e nwere mmelite nke akara ngosi ọ bụla ma ọ bụ ihe oyiyi ọ bụla ... ọ na-enye ya ume ọhụrụ na etiti oge ... Banyere ibu Ram ... A na-ezipụ Firefox na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1gb (enwere m 4gb, na-ebelata buut ga-adị 3.7) na ọ na - abawanye ka oge ị na - eji ya eme ... kedụ ihe ọ ga - abụ?, Crhome ọbụlagodi na eri ya niile ego ya bụ 350 mb, na opera opera jiri 390 mb ... nwalere ibe 12 mepere emepe, 4 ya na adobe Player (youtube, XD wdg) na nkezi nke 43 nkeji. Detuo nkwubi okwu gi XD.
ndị Rekonq bụ poop -.
Ọ bụ, ọ bụ eziokwu, mana ọ ka mma nke ukwuu na ụdị ikpeazụ.
anụ ahụ dijo
m jiri abalị na-erepịa m obere (firfox pre-alpha version)
M na-atụnyere ya na chromium na ọ na-erepịakwa m ihe 30 usoro 1167,012 mb na 13 taabụ na Nightly na otú na 3 ìgwè nke taabụ na ngụkọta bụ ihe karịrị 30 ọ na-akpali si 350mb ka 360mb na N'ezie, a ruo mgbe ike gwụrụ nke nkwụnye (chromium dị ọcha)
Emere m nke a na Ubuntu 12.10 x64
Agbalịrị m ihe nchọgharị niile, maka m kachasị opera, anaghị m amasị Firefox, ọ na-erepịakwa oke ma ọ bụ otu opera. M ga-emesi ya ike na midori dịkwa oke ọsọ.
Firefox na-erepịakwa ọtụtụ
Taa kọmputa abịa na a otutu ebe nchekwa ma ọ bụrụ na ọ bụghị na ị nwere ike mgbe niile tinye ihe.
Na ha na-eri ebe nchekwa abụghị ezigbo nsogbu, ihe ọjọọ bụ mgbe ha na-eri ọtụtụ ihe CPU.
Mgbe niile na ebe nchekwa na disk ohere bụ n'ezie ọnụ ala tụnyere ndị ọzọ nke ngwaike na ọ bụ naanị replaceable ma ọ bụ "upgradable" akụkụ na laptọọpụ.